VUC စီးရီးစိတ်ကြိုက်ကက်ဘိနက် - တရုတ်ရှန်ကျန်း Vango နည်းပညာ
VAC စီးရီး AC အ-powered လေအေးပေးစက်
VIT စီးရီး Intelligent အပူထိန်းကိရိယာ
VIF စီးရီးဝါသနာရှင် Filter ကို
VAC စီးရီး AC-စွမ်းအင်သုံးလေအေးပေးစက်
S က ize: Customized
တိကျတဲ့စိတ်ကြိုက်လိုအပ်ချက်များကိုသည်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုပေးသွားမှာပါ ကျေးဇူးပြု. !
အဆိုပါဝန်ကြီးအဖွဲ့ထိုကဲ့သို့သောလမ်း, မီးရထား, ပန်းခြံ, အိမ်ခေါင်မိုးများနှင့်တောင်ကြီးတောင်ငယ်အဖြစ်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုကပြွီးနှင့်အတွင်းပိုင်းကိရိယာများများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများကိုထုတ်လွှင့် & ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်း, ပါဝါထောက်ပံ့ရေး, စောင့်ကြည့်မှု, ဘက်ထရီနှင့်အခြားအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်သက်ဆိုင်သည်။
1. ပစ္စည်း : Using superior hot galvanized steel, aluminum or stainless steel with strict surface treatment, adopting automatic coating production line and accurate painting technology to ensure good resistance to wind, sand, rain, sun and salt environment.
2. Structure: လူပျိုသို့မဟုတ်ပေါင်းစုံအခန်းကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းကိရိယာများတပ်ဆင်ခြင်းတွေ့ဆုံ, ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်နှင့်အတူအညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။
3. ငါ ntegration : အဆောက်အဦးအပြင်ကက်ဘိနက်ဂီယာသုံးစက်ကိရိယာများကိုတပ်ဆင်, ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာများ, ဘက်ထရီနှင့်အခြားအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်သက်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်
4. Heat dissipation components: Air ကိုအေးစက်, TEC, heat exchanger အခမဲ့အအေး (optional ကိုအဖြစ် dustproof ဒီဇိုင်း)
5. P ကို ower ထောက်ပံ့ရေး: AC အသို့မဟုတ် DC က
6. Ingress ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး : ≥IP55
7. S က ecurity : Using three-point lock and 1 additional padlock, the cabinet is not exposed removable fasteners, good anti-theft performance
8. စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး: အဝေးထိန်းဘို့ RS485 interface ကိုမှတဆင့်ဘက်စုံသုံးနှိုးဆော်သံကို output နှင့်အဆင့်အတန်းအစီရင်ခံစာပေး
ယခင်: VHP Series Heat Pipe
နောက်တစ်ခု: VBA စီးရီး AC အပြောင်းပြန်လှန်ကြိမ်နှုန်းလေအေးပေးစက်
AC Power ဖြန့်ဖြူးဝန်ကြီးအဖွဲ့
လူမီနီယမ် Panel ကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့
ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝါသနာရှင် Filter ကို
FTTX ကို C abinet
High Quality ဘက်ထရီဝန်ကြီးအဖွဲ့
High Quality ဝန်ကြီးအဖွဲ့
သတ္တုဘက်ထရီ Box ကို
Sanlian တစ်ခုမှာခရိုင်, Hualian အဝန်း, Longhua လမ်း, Longhua ခရိုင်, ရှန်ကျန်း။